Xagee Ayey u Socotaa Siyaasada EPRDF? – Rasaasa News
Nairobi, Sep 14, 2018 – Labada urur ee ugu tunka wayn isbahaysiga EPRDF waa OPDO iyo ANDM, ayaa hardan ugu jira sidii lagu badali lahaa magaca Kacaanka Dimoqraatic ah ee ay kumidaysan yihiin, kaas oo uu sameeyey raysal-wasaarihii dhintay Meles Zenawi.
Inkasta oo dhaqaalaha Itoobiya kor u socday 15kii sano ee tagay iyada oo lagu shaqaynayay magaca isbahaysiga EPRDF, ayaa haatan ku xigeenka xoghayaha golaha dhexe ee ANDM, Megbaru Kebede wuxuu leeyahay magaca EPRDF maalmihiisii waa la dhaafay.
Kooxda ANDM waxay wadaa qorshe ah in saddex magac mid la qaato, si loo badalo magaca EPRDF sida; social democracy, liberal democracy and democratic development, kulanka EPRDF oo furmi doona todobaadka dambe ayaa laggaga wada xaajoon arintan.
Haddii lagu heshiis la gaadho, ANDM oo ka mid ah isbahaysiga EPRDF, waxay soo bandhigi doontaa qorsheyaasha iyada oo noqon doonta xisbiga hogaanka ku dayashada dalka.